Fuudhaa fii heeruma Aadaa Oromoo – Welcome to bilisummaa
bilisummaa October 19, 2014	2 Comments
Mararoo misiroon dhaammattu
2. Fedhiin ala horiidhaan jijjiramuu:-
3. Walcaalchiisuu:- Aadaa Oromoo keessatti yeroo hedduu ijoollee dubaraarra dhiira caalsifachuun ni calaqqisa. Yommuu dubartiin tokko dhiira deessuufi dubara deessullee gammachuun namonni mul’isan walqixa miti (amma amma jijjiramoonni jiraatan illee). Yommuu weedduu da’umsaa weeddisan illee akkan armaan gadiitti dhiira caalchisuun weeddisu turan.
Kana malees dubarrii heerumtee kan ormaa taati, dhiirimmoo yoo fudheellee qe’ee warrasaatti hafa jedhanii waan amananiifis akkana jedhu:-
Kootiin kan keetii ani maal keetii? Jechuudhaan dhalootumarraa kaasanii ishee akka lagaatti akka ilaalaniifi obboleeshaa warra dhiiraa ofitti akka aansaa turan dubbatti. Kana malees obbolaan dhiiraas isheef osoo ho’uu dhiisanii heerumaaf dabarsanii kennuusaaniif ni komatti.
Walumaa galatti, haalli dubarri heerumuuf jettuu mararoodhaan yaadashee ibsattu garaagara ta’uullee qabiyyeensaa walirraa fageenya qaba jennee hin amannu.
Tags aadaa fuudha giistii goftaa heeruma
Previous Gutuu Hawaasa Baqataa Oromo Biyya Masrii Hundaaf :
Next Barri 2014 Seenaa Qabsoo Oromoo keessatti waan ittin ibsamu hedduu
Bareeda wontoota barbaachisan bids kaanaan itti dabala gadi nuuf dhiisa!